Executive Interview: The Hills @ Pun Hlaing with Real Estate Developer Stephen Purvis
An interview with Stephen Purvis, head of Yoma Land on The Hills @ Pun Hlaing
1. What is the concept of this house?
People buyahouse for basically3reasons. It could just beasensible investment. This is un-unsentimental, rational decision based on cost versus value and risk calculation. It could be based on pure desire. This is the same motivation that drives people to buy branded handbags, luxury cars and isavery strong driver in an image conscious age. Or it could be because it offers you all that you want fromahome and you can imagine being happier there than you are in your current home. With this product we have met these3criteria.
By listening to our customers. We spentayear discussing the very personal needs of potential clients and existing residents and owners. The conclusions were that at design concept stage we need to focus less on the architectural form but instead consider the planning of the house from the perspective ofayoung family with all that this implies functionally. Everyone we talked to had interesting social or cultural requirements that were not being met in their current home. A pattern emerged with recurring themes. By addressing these in detail the plan emerged aroundacentral staircase. This home works for everyone, from babies to grandparents.
Mya Myitzu, Serge Pun, Stephen Purvis
3. What other aspects of the design are important?
We haveaclose relationship with Mya forged during the design of the PenRes sales gallery which is based on trust and shared values of quality. The decision to work with her wasanatural progression and she bringsafresh, inspired look and feel to the design. We are also focused on driving down energy costs for homeowners in parallel with developingasustainable agenda. This product should achieve 20% to 25% less energy use than the forms of construction we have historically used at Pun Hlaing.
၁။ The Hills @ Pun Hlaing ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကဘာများလဲရှင်းပြပေးပါဦး။
လူတွေအိမ်ဝယ်တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက် (၃)ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့၊ ဒုတိယတစ်ချက်က ဈေးကြီးတဲ့ branded designer အိတ်တွေ၊ ကားတွေကို ကြိုက်လို့ဝယ်ထားသလိုမျိုး အိမ်တွေကို ဝယ်ထားတာ မျိုး၊ နောက်ဆုံးကတော့ မိသားစုနဲ့ နေထိုင်ဖို့ ဆိုပြီး ဝယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆောက်လုပ်မယ့် The Hills @ Pun Hlaing ကတော့ ဒီ (၃) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
၂။ ‘The Hills @ Pun Hlaing’ ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောက်လုပ်မှာလဲ။
အဓိကကတော့ အိမ်ဝယ်သူတွေရဲ့ စကားသံတွေကို နားထောင်တာပါပဲ။ လက်ရှိပန်ုးလှိုင်အိမ်ရာမှာ နေနေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ၊ ပန်းလှိုင်မှာ အိမ်ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေနဲ့ တစ်နှစ်လောက်သေချာဆွေးနွေးပြီး လူလတ်ပိုင်း မိသားစုတွေရဲ့အမြင်၊ လိုအပ်ချက်စတာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းတွေဟာ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအစရှိတာတွေကို အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ထည့်စဉ်းစားလာကြ ပါတယ်။ တချို့အိမ်တွေမှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေမပြည့်မှီတဲ့အတွက် အဆင်မပြေတာလေးတွေ ကြုံတတ်ကြ ပါတယ်။ The Hills @ Pun Hlaing ကတော့ မိသားစုတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အသေးစိပ်စဉ်းစားပြီး ကလေး ကနေ အဘိုးအဘွားအထိ အားလုံးနေရတာ အဆင်ပြေအောင် ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။
၃။ ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တခြားပြောချင်တာက။
M.ID Signature ရဲ့တည်ထောင်သူ မမြမဉ္ဇူဟာ Peninsula Residence sales gallery ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူထားပြီးတော့ သူမရဲ့ဒီဇိုင်းတွေဟာ ထူးခြားဆန်းသစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ The Hills @ Pun Hlaing ရဲ့ထူးခြားချက်က စွမ်းအင်ကို 20% မှ 25% ထိလျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Mr. Stephen Purvis နှင့် ပတ်သက်၍
Mr. Stephen Purvis ("Mr. Purvis") သည် Yoma Land ၏ အကြီးအကဲအဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။ သူသည် ရိုးမ အုပ်စုသို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းဒါရိုက်တာအနေ ဖြင့် စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစ၍ Yoma Central စီမံကိန်း၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ အဖြစ် ဆက်လက်၍ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။ သူသည် StarCity ၏ အဓိက အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Mr. Purvis သည် ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အရေးကြီးသော ဘက်စုံ သုံးအိမ်ရာစီမံကိန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း အပါအဝင် အိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွင် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် အတွေ့အကြုံရှိ သူဖြစ်သည်။ ရိုးမအုပ်စုသို့မဝင်ရောက်မီ သူသည် ကျူးဘားနိုင်ငံ အထူးပြုတိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ Coral Capital Group တွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး Hotel Saratoga အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း များတွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေခြင်း၊ တည် ဆောက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး အပိုင်း များပါ ဝင်ပြီး ရေရှည်တည်ဆောက်ရသော အိမ်ရာစီမံကိန်း များကို ကြီးကြပ်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် Royal Institute of British Architects ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Newcastle University မှ ဗိသုကာပညာရပ် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူး) နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Westminster University မှ ဗိသုကာဘွဲ့တို့ကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။